Apple dia mitahiry ny drafi-pandresen-dahiny hamaky iPhones tsy miankina amin'ny sary tsy manara-dalàna
Home » Lahatsoratra farany farany » Zon'olombelona » Apple dia mitahiry ny drafi-pandresen-dahiny hamaky iPhones tsy miankina amin'ny sary tsy manara-dalàna
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • fanabeazana • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Na ny mpiasan'ny Apple aza dia nilaza fa naneho ny ahiahiny amin'ny teknolojia detection, manahy fa mety hampiasaina hiasa manodidina ny fiarovana encryption izany, fa mety hamantatra sy hanome saina ny sary vitsivitsy izy ireo.
Apple hanemotra ny scann'ny iPhone manafika.
Ny scan an'ny Apple dia mitady fitaovana fampijaliana ankizy.
Ireo mpikatroka sy vondrona marina dia maneho ny ahiahiny amin'ny resaka sivana sy ny tsiambaratelo.
Ny fanambarana vao haingana nataon'i Apple momba ny fikasana hanara-maso ny iPhones tsy miankina rehetra ho an'ny sary sy ny resaka mety misy fametavetana zaza tsy ampy taona (CSAM) dia nantsoina avy hatrany handao ny drafitra ataon'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona, ​​anisan'izany ny American Civil Liberties Union (ACLU).
Taorinan'ny fitsikerana marobe taorian'ny fanambaràna dia nanambara i Apple fa “haka fotoana fanampiny” amin'ny volana ho avy mba hiasa amin'ny drafitra faneva ny CSAM, ao anatin'ireo ahiahy avy amin'ireo mpikatroka mafàna fo sy vondrona mpiaro ny zon'olombelona noho ny resaka sivana sy ny tsiambaratelo.
"Miorina amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanjifa, vondrona mpiaro, mpikaroka ary hafa, nanapa-kevitra izahay fa haka fotoana fanampiny mandritra ny volana ho avy mba hanangonana fampiasa ary hanao fanatsarana alohan'ny hamoahana ireo endri-javatra fiarovana ny zaza manan-danja indrindra", hoy ny Apple hoy ny mpitondra teniny tamin'ny fanambarana androany.
Ny teknolojia an'i Apple dia hanao scan iPhone sary sy resadresaka ho an'ny CSAM, mampiasa programa nantenain'ny orinasa teo aloha fa mbola hiaro ny tsiambaratelon'ny tsirairay satria ny teknolojia dia tsy mamantatra ny antsipirian'ny sary na resaka, na mila manana azy roa - na dia maro aza ny mpitsikera no naneho ny fisalasalany.
Mampiasa angon-drakitra fanovozan-kevitra na 'tenifototra sary' ny rafitra mba hamantarana ny atiny manokana atokana, na dia efa nampitandrina aza ny manampahaizana manokana momba ny fiarovana fa mety ho voafitaka ny teknolojia toy izany, na mety hadika vilana ny sary tsy manan-tsiny.
Na ny mpiasan'ny Apple aza dia nilaza fa naneho ny ahiahiny amin'ny teknolojia detection, manahy fa mety hampiasaina hiasa manodidina ny fiarovana ny encryption izy io, mety hahafantatra tsara sy hanao saina ny sasany sary - na koa ny governemanta sasany mety hitrandraka azy hitadiavana fitaovana hafa. Nanamafy i Apple fa handà ny fangatahana avy amin'ny governemanta hampiasa io rafitra io amin'ny zavatra hafa ankoatry ny sary fanararaotana ankizy.
"Tsy hanome tsiambaratelo sy tsiambaratelo ho an'ireo mpampiasa intsony ny iMessages amin'ny alàlan'ny rafitra fandefasana hafatra miafina miafina izay tsy misy afa-tsy ny mpandefa sy ireo mikasa no mahazo ny fampahalalana alefa", hoy ny namaky taratasy avy amin'ny fiaraha-mitantana vondrona maherin'ny 90. an'ny CEO Apple Apple Tim Cook momba ny fiovana mety hitranga.
Tsy fantatra ny fizotry ny fotoana fampihemorana ankehitriny, fa ny rafitry ny detection vaovao dia nokasaina hampiasaina amin'ity taona ity.